ထရပ်ကားဘရိတ်စည် ဆိုတာဘာလဲ။ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံး ထရပ်ကားဘရိတ်စည် မှအကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေရန်
SHIN-LI AUTO PARTS CO., LTD. အရည်အသွေးမြင့်မားများအတွက်အမျိုးမျိုးရဲ့သတ်မှတ်ချက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သူတစ်ဦး professionalof ကုမ္ပဏီများကိုဖြစ်ပါသည် ထရပ်ကားဘရိတ်စည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများချောထုတ်ကုန်များ၏ထုတ်ကုန် '' ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအာမခံထားသောဤစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဦးဆောင်အစွန်းထွက်ပစ္စည်းများသည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်း, ရှိသည်။ အခမဲ့ဖြစ် ကျေးဇူးပြု. ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူအဆက်အသွယ် အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်။
ပုံစံ - 43512-36101 43512-36100 DT003
TOYOTA DYNA ဘရိတ်စည်.ဘရိတ်ဘရိတ်ရှေ့
DYNA 200 B ကို
ပြည်တွင်းအချင်း အမြင့် ဘရိတ်လမ်း Hub Hole အချင်း လုံး လုံးအရွယ်အစား
အတွင်းထုပ်ပိုး: လွတ်လပ်သော A1 အမျိုးအစားလေးလံသောပုံးထုပ်ပိုး.ပုံးများကိုကြီးမားလွန်းခြင်းနှင့်တိုက်မိခြင်းနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်ပြီးပြည့်စုံသောအရွယ်အစားဖြစ်သည်.
အပြင်ထုပ်ပိုး: ISPM 15 အပူသည်သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်.စက်မှု pallet ရုပ်ရှင်ကျုံ့(PE ရုပ်ရှင်).အအေးမိ-အနိမ့်လှိမ့်-သံခါးပတ်ကြိုးကာဗွန်သံမဏိ.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.brakedrum.com.tw/my/truck-brake-drum.html
အကောင်းဆုံး ထရပ်ကားဘရိတ်စည် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် ထရပ်ကားဘရိတ်စည် မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ
နောက် Drum ဘရိတ်